Ao anatin’ireo adidy ilaina eo amin’ny fiainana
“Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko tamin’i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra”. Asa. 20:24
Ny tanjakao ara-panahy sy ny fitomboanao amin’ny fahasoavana dia hifandanja amin’ny asam-pitiavana sy ny asa tsara ataonao amim-pifaliana ho an’ny Mpamonjinao, izay tsy nihazona na inona na inona , eny, fa na dia ny ainy aza, mba hahafahany mamonjy anao (...)
Raha ny asa tsara ataontsika fotsiny dia tsy hahavonjy na iza na iza amintsika, saingy tsy azo vonjena isika raha tsy misy asa tsara. Ary rehefa vitantsika izay rehetra azontsika atao, amin’ny anaran’i Jesosy sy ny heriny dia tokony hiteny isika manao hoe: “Mpanompo tsy mahasoa izahay” Lio. 17:10
Raha manana ny harem-pahasoavan’i Kristy ao am-ponao ianao, dia tsy hihazona izany ho anao samirery kanefa ny famonjem-panahy dia miankina amin’ny fahafantarana ny lalam-pamonjena izay azonao omena. Mety tsy hanatona anao izy ireo hanambara aminao ny hetahetam-pony , saingy maro no noana tsy afa-po, ary maty i Kristy mba hanan’izy ireo ny harem-pahasoavana. Inona ary no hataonao mba handraisan’ireo fanahy ireo anjara amin’ireo fitahiana izay iainanao?
Ny fitomboana amin’ny fahasoavana dia miseho amin’ny fahaizamanao mitombo hatrany hiasa ho an’Andriamanitra. Izay mianatra ao amin’ny sekolin’i Kristy dia hahalala hoe fomba ahoana no hivavahana sy hitenena amin’ny anaran’ny Tompo. Noho ny fahafantarany fa tsy ampy fahendrena sy fanandramana izy, dia hapetrany eo ambany fanofanan’Ilay Mpampianatra Lehibe ny tenany, amin’ny fahalalana fa toy izany ihany no hahazoany ny fahatanterahana eo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra. Ary isan’andro izy dia afaka ny hahatakatra tsara kokoa ny zava-panahy. Ny andro tsirairay anaovany asa amim-pahazotoana dia hahita azy amin’ny fiafaran’izany andro izany mendrika kokoa hanampy ny hafa.
Mbola tokony hianaran’ny maro amin’ireo mpanara-dia an’i Kristy ny lesona fototra ny amin’ny zotom-po feno fahafaham-po amin’ny fanatanterahana ireo adidy tena ilaina eo amin’ny fiainana . Mitahy fahasoavana bebe kokoa sy fitsipi-pifehezana ny toetra hentitra kokoa, ny fiasana ho an’Andriamanitra amin’ny fahaiza-manaon’ny mpamboatra milina, ny mpivarotra, ny mpahay lalàna, na ny mpiompy , mitondra ireo foto-kevitry ny fivavahana kristianina ho amin’ny asa aman-draharaha fanao mahazatra eo amin’ny fiainana andavanandro , toy izay ny fikelezana aina amin’ny maha-misionera fanta-daza eo amin’ny sahan’asa mivelatra. Mitaky retsipandre ara-panahy matanjaka ny fitondrana ny fivavahana ao amin’ny trano fiasana sy ny birao fandraharahana , manamasina ny tsipirian’ny fiainana isan’andro , ary mibaiko ny raharaham-barotra rehetra hifanaraka amin’ny filamatry ny tenin’Andriamanitra. Kanefa dia izany indrindra no takin’ny Tompo.